आफ्नै देश संकटमा परिरहेका बेला, चीनले गर्यो नेपाललाई ६५ अर्ब सहयोग ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/आफ्नै देश संकटमा परिरहेका बेला, चीनले गर्यो नेपाललाई ६५ अर्ब सहयोग !
आफ्नै देश संकटमा परिरहेका बेला, चीनले गर्यो नेपाललाई ६५ अर्ब सहयोग !
उहाँले यसै भएका हुँदा स्थानीय तह र सरोकारवाला सबैले यस अवसरलाई उचित सदुपयोग गर्न सहयोग गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आह्वानसमेत गर्नुभयो । उपाध्यक्ष कँडेलले सुरुमा सुन्दा त आफूलाई नि पत्यार नलागेको तर औपचारिक सम्झौताका काम अघि बढेपछि भने यसलाई नेपालका लागि ठूलो अवसरका रूपमा लिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
दमक नगरपालिकाका मेयर रोमनाथ ओलीले मानिसको स्वास्थ्य बिगारेर फस्टाउने उद्योग नभई वातावरणमैत्री उद्योग निर्माणमा स्थानीय तहको सधैँ सहयोग रहने बताउनुभयो । गौरादह नपाका प्रमुख रोहितकुमार शाहले उद्योग स्थापना हुने क्षेत्रका सर्वसाधारण कसैलाई पनि अन्याय नहुने गरी काम अघि बढाउन माग गर्नुभयो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा टीकाराम उप्रेतीले लेखेका छन् ।
आजबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक ७ घण्टा बन्द हुने
थापाथलीस्थित प्र’सुती अस्पतालमा उपचाररत ग’र्भवतीलाई कोरोना पुष्टि